'Chucky' Akakanda Basa reVadiki Nevakaipa Charles Lee Ray - iHorror
musha	Horror Varaidzo Nhau	'Chucky' Akakanda Basa reVadiki uye Vakaipa Charles Lee Ray
'Chucky' Akakanda Basa reVadiki uye Vakaipa Charles Lee Ray
by Trey Hilburn III July 21, 2021 1,725 maonero
Handisi kuzonyepa, zvese izvi Chucky nhau ndezvimwe zvezvinhu zvinonyanya kufadza zviri kuitika muhutorphere. SYFY's Chucky zvinoita sekunge kuchaputika uye kana iwe ukafunga kuti Don Mancini achange achiendesa chinhu ichi kumusoro, isu tiri vakapara mhosva. Iyo yazvino rad bit Chucky Nhau, zvichitevera iyo yatove huru turera yatakagovana pakutanga kwesvondo rino, iko kukandwa kwechidiki uye akaipa Charles Lee Ray
Tendeuka, ma2019 The Prodigy uye iri yakaipa yakaipa yevechidiki, ichatora chinzvimbo chaCharles Lee Ray mukati Chucky. David Kohlsmith akagadzirira kupinda mune imwe yakaipa vana mindset. Iye aive chaiye muridzi wekutyisa mukati The Prodigy. Ndine chokwadi chekuti achaita zvinoshamisa pano futi.
Asati munhu wese arasa njere. Ini ndoda kuratidza kuti Brad Dourif achazopa izwi ku Chucky. Zvese Charles Lee Ray kuyaruka chinhu chichava chakasiyana zvachose.
Mutsara we Chucky inoenda seizvi:
Mushure mekukohwa mudhori Chucky mudhori akatendeuka panotengeswa peguta remuguta, rakanakisa dhorobha reAmerica rinokandirwa mumhirizhonga sezvikamu zvakateedzana zvekuuraya zvinotanga kufumura hunyengeri uye zvakavanzika zveguta. Zvichakadaro, kuuya kwevavengi nevabatsiri kubva munguva yakapfuura yaChucky kunotyisidzira kufumura chokwadi chiri shure kwekuuraya, pamwe nemadhimoni emadhimoni mavambo asinga zivikanwe semwana airatidzika kunge akajairika uyo neimwe nzira akazova chikara chinozivikanwa.
Chucky's gumi nemasere-episode akateedzana kuUSA Network uye SYFY kutanga Gumiguru 12. Uri kufara nezve sarudzo yemudiki Charles Lee Ray? Tiudzei muchikamu chemashoko.